layliyo lagu sameeyo qolka jimicsiga oo runtii dhameystiran | Bezzia
Susana godoy | 06/04/2021 16:00 | Jimicsiga
Haddii aadan weli garanayn meesha aad ka bilaabanayso qolka jimicsiga, waan kaa caawinaynaa arrintaas. Sababtoo ah waa run in mararka qaarkood aan bilowno sameynta taxane, tababarida kaliya koox muruq ah oo tan ugu fiican ayaa ah inaan nafteena u hurno dhowr, ama aan ku badalanno maalmo ama tababar, sida aad doorbideyso. Ma rabtaa inaad ogaato layliyo lagu sameeyo qolka jimicsiga?
Xaqiiqdii inbadan oo kamid ah waad horeyba u garatay, laakiin waxaan kuu sheegi doonaa kuwa kuugu dhameystiri kara adiga. Sidaa darteed, waxaad awoodi doontaa inaad ka tagto tababarkaaga gebi ahaanba cusbooneysiin ama cusbooneysiin, adoo taas og dhowr jimicsi oo keliya ayaad jimicsiga ku jimicsan doontaa jirka oo dhan. Miyaanay ka mid ahayn fikradaha waaweyn? Hagaag, ha moogaanin wax kasta oo soo socda.
1 Saxaafadda militariga, layli aasaasi ah oo garbaha loogu talagalay
2 Jiid-jiido dhabarka
3 Riix Bench riix inta udhaxeysa jimicsiyada lagu sameeyo qolka jimicsiga
4 Waxaad ku jimicsaneysaa dhabarkaaga iyo lugahaaga kor u qaadista dabka
Saxaafadda militariga, layli aasaasi ah oo garbaha loogu talagalay
Waxaa laga yaabaa inaad guriga ku haysatid miisaanno ama baarar, sidaa darteed mid ka mid ah leylisyada lagu sameeyo qolka jimicsiga ayaa ah kan. Waxay ku saabsan tahay saxaafadda militariga taas oo naga dhigeysa inaan jimicsiyo garbaha. In kasta oo dhabarku sidoo kale ku lug yeelan doono qaab gaar ah. Si tan loo sameeyo, waxaan ku qaadan karnaa xoogaa culeysyo ama dumbbells ah gacan kasta, in kasta oo haddii aad doorbideyso aad iskaa u caawin karto baararka oo aad meel ku ridi karto disk dhamaadka dhinac kasta. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad qaaddo culeyska ku habboon baahiyahaaga. Layligu wuxuu ka kooban yahay xusulku inuu fooraro, oo gacmaha lagu hayo heerka xabadka, si loogu dhaqaaqo in kor loogu qaado gacmaha madaxa korkiisa, lana gaadhsiiyo si loo kala bixiyo. Waa riixitaan sare oo aan ku guuleysan doonno dhowr jeer oo ku celcelin ah.
Waxay kaloo noqon kartaa inaad qalab ugu haysato darbiga gurigaaga, in kastoo qolka jimicsiga waxaan kuu sheegi doonaa inaad sameyn doontid. In kastoo Waa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee la codsado in laga shaqeyn karo dhabarkaa, sidoo kale wuxuu leeyahay sharaf dhac badan. Maxaa yeelay markasta ma sahlana in la helo. Laga soo bilaabo marka aad bilowdo shukaansiga, markaa waxaad arki doontaa in ta ku xigta ay wali ka fiicnaan doonto tii hore iyo dhiirigelinta, iyo in ka badan. Waa jimicsi dhameystiran maxaa yeelay gacmaha iyo xitaa xudunta ayaa sidoo kale ka qeyb qaadan doona.
Riix Bench riix inta udhaxeysa jimicsiyada lagu sameeyo qolka jimicsiga
Haa, waa mid ka mid ah kuwa caanka ah uguna dhameystiran. Tan iyo markii kiiskan waxaan jimicsi ku sameyn doonnaa qeybta hoose iyo sidoo kale garbaha. Si tan loo sameeyo, waa inaan ku seexannaa dhabarkayaga keydka. Kadib, cagahaaga dhig dhulka, qandaraas alaabooyinkaaga oo booskaaga dhig. Si aan u qaadno baarka iyo culeyska aan hoos ugu dhaadhici doonno dhererka dusha hoose ama in yar ka hooseeya. markii aan gaarno, waxaan dib ugu laaban doonnaa hooseeya iyadoo kor u qaad ah, laakiin haa, hoos u dhaca ayaa ka gaabin doona. Neefsashada iyo feejignaanta waa inay na raacaan markasta si aan lumin dheelitirka.
Waxaad ku jimicsaneysaa dhabarkaaga iyo lugahaaga kor u qaadista dabka
Haa, isagu waa mid kale oo ka mid ah halyeeyadii aan doonaynin inuu seego dhoolatuskan jimicsiga sidoo kale. Labadaba dhabarka, sinta ama lumbar iyo sidoo kale lugaha ayaa lahaan doona jimicsiga dhimashada. Waad ku sameyn kartaa labadaba dumbbells iyo baarka, sida ku xusan doorashadaada xorta ah. Markaan culeyska hoos ugu dhigeyno gacmaha, lugaha waa in la rogrogmadaa, halka dhabarka si toosan loo hayo oo aan waxyar u jiheysano jirka horay. Laakiin xusuusashada inaad ku riixeyso laabtaada banaanka, si aadan horey ugu riixin baarka. Waxaan u qaadaneynaa sida ugu dhow jirka sida ugu macquulsan si looga fogaado inaan sameyno dhaqdhaqaaqyo dhaawici kara dhabarkayaga.
Xaaladdan oo kale, marka lagu daro lugaha, waxaan sidoo kale u socon doonnaa quadriceps iyo dabcan, qaybta lumbar. Marka waa mid ka mid ah waxyaabaha waa weyn ee aan ku heyno nolosheena iyo jimicsiyada lagu sameeyo qolka jimicsiga. Waa mid kale oo ka mid ah tusaalooyinka cad ee inagu waajib ah inaynu dhabarkayaga toosanno, halka cagaha ama jilibyadu aaney aad u furmin. Waa inaad iska ilaalisaa in markaad hoos u dhacayso aad khalad ka dhigato inaad jilbahaaga isu keento ama aad u dhaqdhaqaaqdo. Sidaa awgeed, waa inaan culeyska u hagaajino sidii aan ku leenahay wax badan ama ka yar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Caafimaadka » Jimicsiga » Jimicsiyada lagu sameeyo qolka jimicsiga oo aad u dhameystiran